Onyinye Ego Pụrụ Iche maka Pbọchị Pizza Pizza - pisklak.net
Onyinye Ego Pụrụ Iche maka Pbọchị Pizza Pizza
Emere 22 ụbọchị na kalenda crypto dị ka Bitcoin Pizza Day mgbe azụmahịa izizi crypto nke otu onye mmemme na Florida simple, afọ 11 gara aga. Hasbọchị aghọwo akụkụ nke akụkọ ifo, ọ bụghị n’ihi azụmahịa, mana karịa n’ihi ọnụahịa ahụ. Nwoke akpọtụrụ aha, Laszlo Hanyecz kwụrụ 10,000 Bitcoins maka pizzas abụọ nyefere. Taa, uru nke azụmahịa that a ga-abụ ihe karịrị $400 nde! Akara ụbọchị akara na kalenda anyị ka anyị makwaara cha cha cha cha. Na aha nke ahụ, onyinye onyinye pụrụ iche maka Bitcoin Pizza Day dị njikere maka gị.
Nkọwa Nye Onyinye Pụrụ Iche
E nwere otutu Ohere iji merie na nzọ secure cha cha Oke na anyị enweghị ike ime ka ọ dịkwuo mfe. Iji nweta uru nke self service pụrụ iche na-eme Bitcoin Pizza Day, dị d e nbanye ma ọ bụ debanye ahan’ọnụ ụlọ anyị ma kwuo self love ahụ. Na, gịnị banyere self love ahụ?
Onyinye cha cha that a pụrụ iche dị mfe, mana mmesapụ aka. Ọ bụrụ na itinye self love, ị ga-enweta ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ. Ọ dị mfe. Ya bụ, anyị ga-eme ka nkwụnye ego gị dabere na nchikota nke nkwụnye self love gị. Nwere ike ibili self service 200 percent naanị ma ọ bụrụ na ị na-azọrọ koodu PIZZABTC. Na tebụl dị n’okpuru, ị ga-ahụ etu mmụba na-eto eto.
Usoro maka koodu: PIZZABTC
Wagering: 35x Max self love: 20x playable : Non-Progressive Ohere mepere, Keno & Video Poker Max nzọ kwa aka: $10
Onyinye that a na-akwụ ụgwọ iji mee ụbọchị gị
Bitcoin Pizza Day na-akawanye mma mgbe ị chọpụtara na $20 FREE CHIP ga-echere gị. Ozugbo ị gbapụtara koodu nke mbụ (PIZZABTC), ị tozuru oke ị nweta koodu ahụ: FREEPIZZA
Usoro maka koodu: FREEPIZZA
Nke ruru eru: Ndị niile jirila PIZZABTC Uru: $20 Wagering: 40x Max self service: $100 Nke a ga – akwụ: